Nereida “Ronaldo caqli ma leh 100 waxaa jeer ka fiican ninkeyga hada, waana tusaale” – SBC
Nereida “Ronaldo caqli ma leh 100 waxaa jeer ka fiican ninkeyga hada, waana tusaale”
Posted by editor on September 28, 2011 Comments
Nereida Gallardo oo ah gabar xayeysiisyada sameysa oo ay horey saaxiib ahaayeen ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo ka tirsan kooxda Real Madrid & qaranka Portugal ayaa weerar afka ah ku qaaday gacaliyaheedii uu ka dhaxeeye xiriir 7 bilood ah oo saxaafadu si weyn faaqiday.
Nereida oo Ronaldo xiriirkoodii saaxiibtinimo uu ku gooyey ka dib markii uu u direy text massage ama SMS (fariimaha gaagaaban ee Mobile-da) ayaa ku tilmaamtey Ronaldo nin tusaale xun u ah caruurta.
Iyadoo jawaab ka bixinaysay hadalo uu saxaafada horey u siiyey Cristiano Ronaldo oo uu isku tilmaamay wiil quruxlow ah, oo taajir ah oo dadku ka maseyraan, ayay taasi waxay kaga jawaabtey “Ronaldo in uu yahay quruxlow laakiin caqli aan laheyn”.
nereida gallardo & Ronaldo waayihii wacnaa 2008
Nereida Gallardo karbaashka ay ku dhufatey Ronaldo intaasi ugama keyne waxay ku tilmaamtey in uu yahay nin aan ku wanaagsaneyn ciyaaraha cariirta waxaana ay sheegtey in uu ka horeeyo ninkeeda ay haatan is qabaan.
“Shakhsiyaadiisu waa mid weyn, laakiin caqli ma leh ayay tiri Nereida Gallardo oo u muuqata inaanay ka soo waaqsan 2008-dii markii Text Massege lagu eryey.
Ronaldo haatan waxaa calanku u saaran yahay oo uu xiriir gacaltooyo la wadaaga gabadha Ruushka u dhalatey ee iyaduna xayeysiisyada sameysa ee Irina Shayk, waxaase wiil u dhashay sanadkii hore ilaa iyo haatan la waysan yahay hooyadiis ka dib markii uu qariyey wiilkiisa hooyadiis.